परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: जीवनमा प्रवेश | अंश ५४० | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: जीवनमा प्रवेश | अंश ५४०
25 जुन 2021
जीवनमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको खोजी परमेश्‍वरको वचनमा आधारित हुन्छ। यसभन्दा पहिले, सबै कुरा उहाँको वचनद्वारा पूरा गरिन्छ भनेर भनिन्थ्यो, तर यो तथ्य कसैले पनि देखेन। यदि तँ वर्तमान चरणको अनुभवमा प्रवेश गर्छस् भने, तँलाई सबै कुरा स्पष्ट हुनेछ, र तैंले भविष्यका परीक्षाहरूका लागि राम्रो आधार निर्माण गरिरहेको हुनेछस्। परमेश्‍वरले जे भन्नु भए पनि, उहाँको वचनमा प्रवेश गर्नुमा ध्यान दे। जब परमेश्‍वर उहाँले मानिसहरूलाई सजाय दिन थाल्नुहुनेछ भनी भन्नुहुन्छ, उहाँको सजायलाई स्वीकार गर्। जब परमेश्‍वर मानिसहरूलाई मर भनी भन्नुहुन्छ, त्यो परीक्षालाई स्वीकार गर्। यदि तँ सधैँ उहाँको सबैभन्दा नयाँ वाणीहरूमा जिउँछस् भने, आखिरमा परमेश्‍वरका वचनहरूले तँलाई सिद्ध पार्नेछ। तँ जति धेरै परमेश्‍वरका वचनहरूमा प्रवेश गर्छस्, त्यति नै चाँडो तँ सिद्ध पारिनेछस्। म किन एकपछि अर्को सङ्गतिमा तिमीहरूलाई परमेश्‍वरका वचनहरू जान्ने र तिनमा प्रवेश गर्ने आग्रह गर्दछु? जब तँ परमेश्‍वरका वचनहरूको पछि लाग्छस् र ती अनुभव गर्छस्, र उहाँका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्छस्, तब मात्र पवित्र आत्माले तँभित्र काम गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। त्यसकारण, परमेश्‍वरले काम गर्ने हरेक विधिमा तिमीहरू सबै सहभागीहरू हौ, र तिमीहरूको पीडा जुनसुकै हदको भए पनि, आखिरमा तिमीहरू सबैले “निशानी” प्राप्त गर्नेछौ। तिमीहरूको अन्तिम सिद्धता प्राप्त गर्नको लागि, तिमीहरू परमेश्‍वरका सम्पूर्ण वचनहरूमा प्रवेश गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई पवित्र पार्ने काम एकतर्फी हुँदैन; उहाँलाई मानिसहरूको सहकार्य चाहिन्छ, उहाँलाई सबैको विवेकशील सहकार्य चाहिन्छ। परमेश्‍वरले जे भन्नुभए पनि, उहाँका वचनहरूमा प्रवेश गर्नमा ध्यान देओ—यो तिमीहरूको जीवनका लागि अझै बढी लाभदायक हुनेछ। सबै कुरा तिमीहरूको स्वभावमा परिवर्तन हासिल गर्नका लागि हो। जब तँ परमेश्‍वरका वचनहरूमा प्रवेश गर्छस्, तेरो हृदय उहाँद्वारा प्रभावित हुनेछ, र तँ परमेश्‍वरले उहाँको कामको यस चरणमा प्राप्त गर्न चाहनुभएको सबै कुरा जान्न तँ सक्षम हुनेछस्, र तँमा त्यो हासिल गर्ने संकल्प हुनेछ। सजाय दिइएको समयमा, केही मानिसहरू थिए जसले यो काम गर्ने एउटा तरिका हो भनी विश्‍वास गरे, र परमेश्‍वरका वचनहरूमा विश्‍वास गरेनन्। फलस्वरूप, तिनीहरू शोधनबाट भएर गएनन्, र केही प्राप्त नगरी र नबुझी सजायको समयबाट बाहिर निस्के। केही मानिसहरू यस्ता थिए जो रत्तीभर पनि शङ्का नगरी यी वचनहरूमा प्रवेश गरे, जसले परमेश्‍वरका वचनहरू त्रुटिहीन सत्य हो र मानवजातिलाई सजाय दिइनुपर्छ भनी भने। तिनीहरूले केही समयसम्म त्यहाँ संघर्ष गरे, आफ्नो भविष्य र आफ्नो गन्तव्यलाई त्यागे, र जब तिनीहरू देखा परे, तिनीहरूका स्वभावमा केही परिवर्तन आएको थियो र तिनीहरूले परमेश्‍वरबारे गहिरो बुझाइ प्राप्त गरेका थिए। सजायबाट भएर आउने सबैले परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन महसुस गरे, र यस चरणको काममा परमेश्‍वरको महान् प्रेम तिनीहरूमाथि आएको, साथै त्यो परमेश्‍वरको प्रेमको विजय र मुक्ति हो भन्‍ने थाहा पाए। तिनीहरूले परमेश्‍वरका विचारहरू सधैँ असल हुन्छन्, र परमेश्‍वरले मानिसमा गर्नुहुने सबै कुरा घृणाबाट होइन, तर प्रेमबाट आउँदछ भनेर पनि भने। जसले परमेश्‍वरका वचनहरूमा विश्‍वास गरेनन्, जसले उहाँका वचनहरूमा चासो दिएनन्, तिनीहरू सजायको समयमा शोधनबाट भएर गएनन्, फलस्वरूप, पवित्र आत्मा तिनीहरूसँग हुनुहुन्नथ्यो र तिनीहरूले केही पनि प्राप्त गरेनन्। जुन मानिसहरू सजायको समयमा प्रवेश गरे, तिनीहरू शोधनबाट भएर गए पनि, पवित्र आत्माले लुकेर तिनीहरूभित्र काम गर्दैहुनुहुन्थ्यो र यसको फलस्वरूप तिनीहरूका जीवनको स्वभाव परिवर्तन भयो। सबै बाहिरी रूपरङ्ग हेर्दा कोही-कोही अति सकारात्मक, सारा दिन प्रसन्नताले भरिएका देखिन्थे, तर तिनीहरू परमेश्‍वरका वचनहरूको शोधन हुने स्थितिभित्र प्रवेश गरेनन् र यसैले अलिकति पनि परिवर्तन भएनन्, जुन परमेश्‍वरका वचनहरूमा विश्‍वास नगर्नुको परिणाम थियो। यदि तँ परमेश्‍वरका वचनहरूमा विश्‍वास गर्दैनस् भने, पवित्र आत्माले तँभित्र काम गर्नुहुनेछैन। उहाँका वचनहरूमा विश्‍वास गर्ने सबैकहाँ परमेश्‍वर देखा पर्नुहुन्छ, र उहाँका वचनहरूमा विश्‍वास गर्ने र तिनलाई स्वीकार गर्नेहरूले उहाँको प्रेम प्राप्त गर्न सक्‍नेछन्!
परमेश्‍वरको वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्नका निम्ति, तैंले अभ्यासको मार्गलाई भेट्टाउनुपर्छ र परमेश्‍वरका वचनहरूलाई कसरी अभ्यास गर्ने सो जान्नुपर्छ। यसरी मात्र तेरो जीवनको स्वभावमा परिवर्तन हुनेछ, यस मार्गद्वारा मात्र तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पारिन सक्छस्, र परमेश्‍वरद्वारा यस प्रकारले सिद्ध पारिएका मानिसहरू मात्र उहाँको इच्छाअनुरूप हुन सक्छन्। नयाँ ज्योति प्राप्त गर्न, तँ उहाँका वचनहरूभित्र जिउनुपर्छ। पवित्र आत्माद्वारा एक पटक मात्र उत्प्रेरित भएर यो हुँदैन, तँ अझ गहिराइमा जानुपर्छ। जो मात्र एक पल्ट प्रभावित भएका छन्, तिनीहरूको भित्री उत्साह जागृत हुन्छ, र तिनीहरू खोजी गर्न चाहन्छन्, तर यो खोजी लामो समयसम्म रहन सक्दैन; तिनीहरू निरन्तर पवित्र आत्माद्वारा उत्प्रेरित हुनुपर्दछ। विगतमा धेरै चोटि मैले परमेश्‍वरका आत्माले मानिसहरूका आत्माहरूलाई प्रभावित गर्न सक्नुभएको होस् भन्ने मेरो आशा व्यक्त गरेको छु, ताकि तिनीहरूले तिनीहरूको जीवन स्वभावमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरून्, र परमेश्‍वरद्वारा प्रभावित हुन खोज्‍ने क्रममा, त्यसद्वारा तिनीहरूले आफ्नै अपर्याप्तताहरू बुझ्न सकून्, र उहाँका वचनहरू अनुभव गर्ने प्रक्रियामा, तिनीहरू आफैले आफ्ना अशुद्धताहरूलाई (स्व-धार्मिकता, अहङ्कार, धारणाहरू, इत्यादिलाई) हटाउन सकून्। नयाँ प्रकाश प्राप्त गर्न सक्रिय भएर मात्र पर्याप्त हुन्छ भनी नसोच—तिमीहरूले सबै नकारात्मक कुराहरूलाई पनि फाल्नुपर्छ। एकातिर, तिमीहरू सकारात्मक पक्षबाट प्रवेश गर्नु आवश्यक छ, र अर्कोतिर, तिमीहरूले नकारात्मक पक्षबाट आएका सबै अशुद्ध कुराहरूबाट आफैलाई छुटाउनुपर्छ। तैंले आफूभित्र अझै कुन-कुन अशुद्धताहरू छन् सो बुझ्नका निम्ति निरन्तर आफैलाई जाँच्नुपर्छ। मानवजातिको धार्मिक विचारहरू, अभिप्रायहरू, आशाहरू, स्व-धार्मिकता र अहङ्कार सबै अशुद्ध थोकहरू हुन्। आफैभित्र हेर र तँमा कुन धार्मिक धारणाहरू छन् कि भनी बुझ्न सबै कुरालाई परमेश्‍वरको प्रकाशका वचनहरूसँग तुलना गर्। जब तैंले ती कुराहरूलाई साँचो रूपमा बुझ्छस्, तब मात्र तैँले तिनलाई हटाउन सक्छस्। कतिपय मानिसहरू भन्छन्: “अहिले पवित्र आत्माको वर्तमान कामको ज्योतिलाई पछ्याउनु मात्रै पनि पर्याप्त छ। अरू कुनै कुराको झमेलामा पर्नु आवश्यक छैन।” तर त्यसपछि, जब तेरा धार्मिक विचारहरू जाग्छन्, तैँले तीबाट कसरी छुटकारा पाउँछस्? के तँलाई आज परमेश्‍वरका वचनहरू पालन गर्नु साधारण कुरा हो भन्‍ने लाग्छ? यदि तँ धर्मको मानिस होस् भने, तेरा धार्मिक विचारहरू र तेरो हृदयमा भएका परम्परागत धार्मिक सिद्धान्तहरूबाट नै बाधाहरू उत्पन्न हुन सक्छन्, र जब यी कुराहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यसले तँलाई नयाँ कुराहरूको स्वीकार गर्नमा बाधा दिन्छ। यी सबै वास्तविक समस्याहरू हुन्। यदि तैंले पवित्र आत्माको हालका वचनहरूलाई मात्र पालन गरिस् भने, तैँले परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न सक्दैनस्। तैँले पवित्र आत्माको वर्तमान ज्योतिको खोजी गर्ने क्रममा तेरो मनमा कुन धारणा र अभिप्रायहरू छन्, र तँमा कुन-कुन मानवीय स्व-धार्मिकता छन्, र कुन-कुन व्यवहारहरू परमेश्‍वरको निम्ति अनाज्ञाकारी छन् त्यो थाहा पाउनुपर्छ। यी सबै कुरा बुझेपछि, तैंले ती सबैलाई फाल्नुपर्छ। तैंले आफ्नो पहिलेका कार्यहरू र व्यवहारहरू त्याग्नु भनेको तैंले आज पवित्र आत्माले बोल्नुहुने वचनहरू पालन गर्न आफैलाई सक्षम तुल्याउनका निम्ति हो। अर्कोतिर, स्वभावमा परिवर्तन गर्ने कार्य परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा हासिल हुन्छ, अर्कोतिर, यसको निम्ति मानिसको तर्फबाट सहकार्यको आवश्यकता पर्छ। एकतिर परमेश्‍वरको काम छ र अर्कोतिर मानव अभ्यास छ, र दुवै अनिवार्य छन्।